हंगेरी अनलाइन क्यासिनो परिदृश्य ईयूको हस्तक्षेपको बाबजुद कसरी स्थानीय अधिकारीहरूले एकाधिकार कायम राख्न सक्दछन् भन्ने उदाहरण हो। उदारीकरण भएको बजार देख्ने कुनै आशा बिना, हंगेरीले चाँडै आफ्नो ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डतिर पुर्‍याएको छ। जब एक अद्भुत Magyar अनलाइन क्यासिनोको खोजी गर्दै, हंगेरी यसलाई खोज्नको लागि संसारका सब भन्दा सजिलो क्षेत्रहरू नहुन सक्छ। यसैले हामीले वेबसाइटहरूको सूची सँगै राख्यौं जुन ह Hungarian्गेरियाली खेलाडीहरूलाई मात्र स्वीकार गर्दैन तर मानकको रूपमा HUF मुद्रा पनि वितरण गर्दछ। हेक, तिनीहरू मध्ये कतिले हंगेरीमा वेबसाइट र ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गर्दछन्।
शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
हंगेरीमा अनलाइन जुवा: यो कानूनी हो?
हो, हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनोमा खेल्नु सन् २०१ 2017 देखि वैध कानूनी हो। हामीले माथि १ 1991 date १ मिति उल्लेख गरेका थियौं, जुन ईंट-र-मोर्टार क्यासिनो कानूनी बनेको त्यो वर्ष थियो। त्यस पछि, १० भन्दा बढी भूमिमा आधारित क्यासिनोहरू देशमा खोलिए, र तिनीहरूको लबी गतिविधिहरूको लागि धन्यवाद, अनलाइन जुवा पनि कानुनी भयो। हंगेरीमा अनलाइन जुवा कानूनहरू गेमि Scheme स्किम ऐन र लोटरी ऐन हुन्। चिट्ठा (र खेल शर्त) आधिकारिक Szerencsejáték Zrt द्वारा आयोजित गरीएको हो। (चान्सका खेलहरू) नियामक निकाय, तर शर्तहरू पूरा गर्ने जो कोहीले पनि इजाजतपत्र पाउन र हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो खोल्न सक्छ। यस सन्दर्भमा जान्नको लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू हुन्:
कानूनी अनलाइन जुवा उमेर हंगेरी १ is बर्ष हो।
अनलाइन क्यासिनो हंगेरी साइटहरूको लागि इजाजत पत्र १० बर्षका लागि प्रभावकारी छ।
आवेदकले विदेशमा पसल सेट अप गर्न सक्दछ तर उसले राख्नु पर्छ
एक हंगेरीको बैंकमा वित्तीय रेकर्ड।
इजाजतपत्रको लागत १००००.००० HUF हुन्छ
मोबाइल क्यासिनोको लागि त्यहाँ कुनै अलग शुल्क र / वा इजाजतपत्र छैन, यदि आवेदकसँग अनलाइन जुवाको लागि इजाजतपत्र छ भने, उसले / उसले आईओएस क्यासिनो र एन्ड्रोइड क्यासिनो प्रस्ताव गर्न सक्दछ
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हंगेरीमा जूवा कानूनहरू जति उदार हुन्छन् उति नै उदार हुन्छन् र यो ती देशहरू बीचमा छ जुन अनलाइन जूवालाई कुनै प्रतिबन्ध बिना अनुमति दिन्छ। हंगेरीको नियमले पनि खेलाडीहरूलाई अफशोर क्यासिनोमा खाताहरू खोल्न र प्ले गर्न अनुमति दिन्छ, ह the्गेरीको सरकारले विदेशमा कुनै पनि वेबसाइटहरू सेन्सर गर्दैन। जुवा वास्तवमै सित्तैमा हो र तपाइँ जहाँ पनी मनपरी खेल्न सक्नुहुन्छ।
कुन हंगेरीमा सर्वश्रेष्ठ क्यासिनो अनलाइन छन्?
जुवा कानूनी र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै हंगेरी क्यासिनो साइटहरू छन् (र मोबाइल क्यासिनो हंगेरी साइटहरू पनि)। त्यहाँ उत्तम अनलाइन क्यासिनो हंगेरी फेला पार्न दुई तरिकाहरू छन्: तपाई कि त तिनीहरूलाई एक एक गरेर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा र समय गुमाउनुहोस्; वा तपाईं हाम्रो हंगेरी क्यासिनो साइटहरू मध्ये एक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, जुन हाम्रो स्टाफले हातले-उठाएको हो र परीक्षण गरीन्छ। तल दिइएका सबै वेबसाइटहरू हंगेरी अनुकूल अनलाइन क्यासिनो हुन् र उनीहरूले उनीहरूको सबै बोनस र खेलहरू ह Hungarian्गेरीका खेलाडीहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध बिना प्रस्ताव गर्छन्। किनकि "हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो कानूनी हो" भन्ने प्रश्नको जवाफ हो, त्यसैले तपाइँ कुनै पनि रमाईलो र लाभदायक जुवा रोक्नको लागि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले केवल तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो र सुरक्षित क्यासिनोहरू छान््यौं: ती सबै सम्मानित एजेन्सीबाट लाइसेन्स प्राप्त छन् (जस्तै माल्टा जुवा प्राधिकरण र कुराकाओ ई जुवालि)) र बोनसको साथ उत्तम खेल प्रस्ताव गर्दछौं। तपाईं तिनीहरूको समीक्षाहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक क्यासिनोको बारेमा बढि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हंगेरीमा इजाजतपत्र प्राप्त इन्टर्नेट क्यासिनोहरू फेला पार्न यो कहिल्यै सजिलो भएको छैन: हाम्रो सूची प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै समय बर्बाद नगरी जुवा खेल्न सुरू गर्नुहोस्!
हंगेरीमा अनलाइन जुवा उद्योगको इतिहास
हंगेरी कानूनीकृत जुवाको सम्बन्धमा साँच्चै अग्रगामी हो। खेल सट्टेबाजी र क्यासिनो खेलहरू १ 1991 XNUMX १ पछि यस देशमा कानुनी छन्। यी गतिविधिहरूलाई नियमित तवरले नियम बनाउने कानूनलाई "जुवा ऐन" पनि भनिन्छ।
यद्यपि २०१ 2017 सम्म क्यासिनो अनलाइन हंगेरी साइटहरू यस कानूनको भाग थिएनन्: हंगेरीमा अनलाइन जुवा कानून सन् २०१ late ढिलो सम्म लागू भएन।
२ 25 बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि, केवल भूमिमा आधारित जुवा र खेल शर्त कानूनी थियो। (र केहि कारणको लागि, घोडा शर्त - हंगेरीवासीहरू घोडा दौड बेट्स मन पराउँछन्।)
यस समयमा, देश मा9ईंट र मोर्टार क्यासिनो छन्। ती मध्ये हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा अवस्थित छन्। अरूहरू डेब्रेसेन, जाइर, सोप्रन र न्यरेगिहजा बीच छरिएका छन्।
जुवा करहरू वास्तवमा देशको आम्दानीको ठूलो अंश हुन्छन् र सरकारले उनीहरूलाई सक्रिय सहयोग गर्दछ। तर केही कारणका लागि तिनीहरू अनलाइन क्यासिनोहरूलाई त्यति मन पराउँदैनन्।
वास्तवमा, तिनीहरूले २०१ 2017 सम्म अनलाइन क्यासिनो हंगेरी साइटहरूलाई कानुनी मान्यता दिएनन्, र त्यसो गर्नुभन्दा पहिले युरोपियन काउन्सिलको फैसलाले गर्दा अनिवार्य भएन।
हंगरीमा जुवा अनलाइन: यो कानूनी हो?
हो, हंगेरीमा अनलाइन जुवा साइटहरू २०१ 2017 देखि कानूनी हो। यो वास्तवमा एकदम अनौंठो यात्रा थियो।
सरकारले अनलाइन जुवालाई कानुनी बनाउने योजना बनाइरहेको थिएन, तर स्थानीय ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरूले पनि अनलाइन क्यासिनोलाई वैधानिक बनाउनका लागि पैरवी गरे, र उनीहरूले युरोपियन काउन्सिल (EC) लाई पनि अपील गरे।
अनलाइन क्यासिनो हंगेरी साइटहरू चुनाव आयोगको कारण कानूनी भयो, सरकारले चाहेकोले होईन। जे भए पनि, पछिल्ला २ बर्षदेखि, कुनै पनि कम्पनीले हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो सेट अप गर्न सक्छ, वा विदेशबाट आफ्नो सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछ।
दुबै विकल्पहरू सम्भव र समर्थित छन्, जबसम्म क्यासिनो साइटको वित्तीय रेकर्डहरू देश सीमानाहरूमा राखिन्छ। हंगेरीमा कानूनी जुवा खेलने उमेर १ 18 हो र सबै अपरेटरहरूले उनीहरूको सेवाहरू प्रस्ताव गर्नको लागि इजाजतपत्र पाउनु हुँदैन। जसको कुरा गर्दै ...
हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो कानूनहरू
१ 1991 2019 १ को ऐन XXXIV को अनुसार जुवा अपरेसनहरूमा यी क्यासिनो खेलहरू केवल भूमिमा आधारित क्यासिनो चलाउने हकदार सहुलियत कम्पनीले मात्र आयोजना गर्न सक्दछन्। यस नियमको परिणाम यो छ कि यो हंगेरियन अनलाइन क्यासिनो इजाजतपत्र प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ र अगस्त २०१ of सम्म हंगेरीमा कुनै अनलाइन क्यासिनो साइटहरू छैनन्।
यद्यपि त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू छन् जसले हंगेरीहरूलाई स्वीकार्छ र उनीहरूको भाषामा वेबपृष्ठहरू पनि छन्। यसबाहेक, खेलाडीहरूले छनौट गर्न र राम्रो अवसरहरू, जस्तै अनलाइन क्यासिनो बोनस र अनलाइन क्यासिनो पदोन्नतिहरूको रूपमा व्यापक खेलको विविध प्रकारको प्रस्ताव राखिन्छ।
हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो भुक्तान विधि
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन जुवा खेलाडीहरूले जम्मा गर्न र फिर्ता लिन सक्दछन्। स्वाभाविक रूपमा, ताकि अपरेटरहरूले तिनीहरूलाई सुरक्षित र निष्पक्ष वातावरणको साथ प्रदान गरिरहन्छ, प्रत्येक पैसा लेनदेन पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्दछ। यस तरीकाबाट, VISA र मास्टर कार्डको क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू प्राय: स्वीकार गरिन्छ। तर त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन् जुन कुशल छन्। यसले Skrill, Neteller वा Paysafecard समावेश गर्दछ। र ईकोपाइज हंगेरीमा उपलब्ध भए पनि, यो जुवा सम्बन्धी स्थानान्तरणहरू यस देशको ई-वालेट प्रयोग गरेर गर्न सम्भव छैन। अधिक जानकारी को लागी, अनलाइन क्यासिनो समीक्षा निर्देशिका बाट परामर्श गर्नुहोस्।
अनलाइन क्यासिनो साइटहरू HUF स्वीकार गर्दै
घरेलु प्रस्ताव को अभाव को कारण, ह opera्गेरियन बजार लक्षित धेरै अपरेटरहरु छन्। नतिजाको रूपमा, सम्भव छ अनलाईन क्यासिनो साइटहरूले HUF स्वीकार गर्दै, जुन जुवा खेलाडीहरूलाई रूपान्तरण शुल्कबाट छुट दिन अनुमति दिन्छ।
शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 1, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 हंगेरीमा अनलाइन जुवा: यो कानूनी हो?
3 कुन हंगेरीमा सर्वश्रेष्ठ क्यासिनो अनलाइन छन्?
4 हंगेरीमा अनलाइन जुवा उद्योगको इतिहास
5 हंगरीमा जुवा अनलाइन: यो कानूनी हो?
6 हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो कानूनहरू
7 हंगेरीमा अनलाइन क्यासिनो भुक्तान विधि
8 अनलाइन क्यासिनो साइटहरू HUF स्वीकार गर्दै
शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन ...